Nke a bụ smartwatch kachasị ọnụ n'ụwa | Akụkọ akụrụngwa
Nke a bụ smartwatch kachasị ọnụ n'ụwa
Smartwatches, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na mmalite ha, abụrụla ngwaahịa nke nnabata ya na-adị nwayọ karịa ihe ndị nrụpụta isi tụrụ anya. Agbanyeghị, ọnụọgụgụ ahụ abụrụla ngwaọrụ na-ere ọfụma nke ọma nke ndị ọrụ were ya A nabatala ya karịa.
Mana ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka smartwatches okomoko, anyị ga-ekwu maka Apple Watch Edition, ihe nlere anya nke ebuputara ya na ọgbọ mbụ nke Apple Watch, onye ikpe ya bụ ọla edo 18-karat ma nwee ọnụ ahịa malitere na $ 10.000. Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, na n'ihi enweghị ọchịchọ, Apple wepụrụ ihe nlereanya a n'ahịa. Iji gbalịa igbo mkpa maka ụdị ngwaahịa a, Tag Heuer egosiputa Tag Heuer ejikọrọ 45 Full Diamond nlereanya.
Firmlọ ọrụ Switzerland egosila ụdị mbipụta a pụrụ iche nke 45 jikọtara ya na ememme SIHH 2018, ihe ngosi teknụzụ kachasị mkpa n'ụwa na ebe ndị nrụpụta kachasị na-eweta akwụkwọ ọhụụ niile ha ga-ebido n'afọ niile. Dị ka anyị pụrụ isi na aha ya, Tag Heuer ejikọtara 45 Full Diamond, chọọ ya mma na okpueze ahụ na eriri ya na diamond 589. A na-eji ọla edo 45-karat na-acha ọcha.
N'ime mbipụta a, anyị na-ahụ gam akporo Wear 2.X, ihe ngosi AMOLED, GPS na mgbawa NFC, yana dịka mkpọ dị iche iche nke Tag Heuer mere. Modeldị mbụ, Tag Heuer ejikọtara 45 dị ọnụ na euro 1.600, ebe mbipụta pụrụ iche Full Diamonds, tAhịa ya dị $ 197.000, na - aghọ smartwatch dị oke ọnụ ugbu a dị na ahịa. Tụle na smartwatch mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ wepụtara nwere ọnụahịa karịrị $ 2.000 ma ree ya dị ka hotcakes, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ nzọ na ụdị nke ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Nke a bụ smartwatch kachasị ọnụ n'ụwa
Maria Carmen Almerich Oche dijo
Echere m na ọ baghị uru!
Zaghachi Maria Carmen Almerich Silla
Meltdown Intel na Specter ngwọta na-eweta reboots na ụfọdụ kọmputa
Netflix agaghị abịa Nintendo Gbanye n'oge ahụ